SIDEE LOO OGAAN KARAA NUUJINTA UKUNTA GURIGA. WAXAAN GO'AANSANAA, HUBINAYNAA IYO HELNAA TAARIIKHDA DHICITAANKA - BEERAHA DIGAAGA
Sidee loo hubiyaa cusboonaanta ukumaha ee guriga
Faa'idada ugu badan ee ukunta waxaa laga wada hadli karaa oo kaliya haddii ay cusub yihiin. Ka dib markay jiifsadaan qaboojiyaha bil gudaheed, waxay lumiyaan qiimaha nafaqada waxayna ku noqdaan halis caafimaad. Marka jidhka la joogo, badeecada dhacday ayaa keenta sarkhaan halis ah, taas oo noqon karta dhimasho. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in si madaxbanaan loo go'aamiyo heerka darajada cusub ee badeecadaas iyo in la fahmo muddada la ogolaan karo ee ku habboon. Dheeraad ah ee maqaalka ah waxaan si faahfaahsan kuugu sharxi doonaa waxa aad raadineysid marka aad iibsaneyso digaaga iyo ukumaha digaaga, intee in le'eg ayaa lagu kaydin karaa iyo meeshii laga rabo.
Sida loo fahmo haddii ukunku cusub yahay: digaag iyo digaagduur
Qaab dhismeedka gaarka ah ee ukunta ayaa u ogolaanaya gudaha in uu sii hayo guryaha faa'iidada leh muddo dheer. Laakiin taasi, xaaladaha kaydinta qaarkood waa muhiim. Haddii kale, gudaha gudaha ayaa bilaabi doona in ay qalalaan, oo qof hadal xun kufilan wuxuu sameynayaa mid aan ku habooneyn isticmaalka dheeraadka ah.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu tijaabin karo qoyaanka cusub ee guriga. Taa awgeed, ma aha in ay lagama maarmaan tahay in la qaado mashiinka mikroskoobo iyo reajiyeyaasha kiimikada ah. Waxaad ku xukumi kartaa sida ugu haboon ee alaabadaasi xitaa dukaanka. Aan helno faahfaahinta.
Ma taqaanaa? Maanta, soo saaraha ugu weyn ee ukunta adduunka waa Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha. Qiyaastii 160 milyan oo ka mid ah badeecadan ayaa sanad walba la soo saaraa. Khabiiro badani waxay u arkaan xaqiiqda ah in digaaggu uu marka hore ka muuqdo waddankan. Oo waxay dhacday meel ka mid ah sanadka 1400 BC.
Marka aad iibsaneyso
Khabiiradu waxay kugula talinayaan inaysan "iibin" iibsan. Fikraddooda, qiimeynta aragti ee alaabtu waa muhiim. Sidaa darteed, u tagay ukumo dukaanka ama suuqa, si taxadar leh u baaro. Shayada dhawaan la burburiyey waxay si isbarbardhigi leh u barbardhigi doonaan dusha sare ee qolofka. Laakiin kuwa horey u jirey muddo dhowr maalmood ah ayaa lagu sifeyn doonaa iftiin gaar ah. Laakiin si diiradda loogu saaro habkan oo kale ee caddayntu maaha mid u qalma. Khubarada ayaa ka digay in iibiyeyaasha iibka ah ay khibrad u yihiin khibradaha kala duwan si ay ugu guuleystaan ​​in ay iibiyaan alaabooyinka. Mid ka mid ah kuwani waa xoqin ama maydhin walxo kasta. Si loo iibsado maaha inay niyad-jebiso walxaha urta, Markaad dooranaysid ukunta ukunta, isbarbardhig qaybaha kala duwan.. Fikrad ahaan, dhammaan daraasaduhu waa inay lahaadaan midab isku mid ah iyo jajab isku mid ah ee qolofka. Haddii aad la kulantid noocyo kala duwan, waxay u badan tahay in iibiyuhu ku qasto ukumaha hore iyo kan cusub. Ku dhaji iyaga. Sanduuqyada xun ee dhacay, waxaa jiri doona ur aan fiicnayn.
Waa muhiim! Qolfaha ukunta cusub wuxuu leeyahay urin qaas ah, taas oo aad u la mid ah lime.
Waxyeello maaha inaad sidoo kale ruxdo ukun cayriin ah. Haddii aad ku maqasho hadal cad, gudahaaga waa inaad diido inaad iibsato. Dhammaan ka dib, hadalku kuma haboona isticmaalka.
Ha iska indha tirin alaabta. nolosha shelf. Adigoo wargelinaya arrintan, soo-saaraha ayaa damaanad qaadaya casriga sheyga, iyada oo la bixinayo si habboon loo kaydiyo. Marwalba dooro kaliya alaab cusub oo isku day inaad isticmaasho ka hor taariikhda lagu tilmaamay ee xirmadan ku dhacday.
Macaamiisha badankoodu ma ahan kuwo halis ah oo ku saabsan mashiinnada baakidhka ukunta oo sii wadaan inay cunaan badeecado dhacay. Sida laga soo xigtay khabiiro, dhab ahaantii, wali wuxuu sii haynayaa ku haboonaanta muddo gaaban. Laakiin ka hor inta aan la isticmaalin, cusbooneysiinta ayaa loo baahan yahay in dib loo eego.
Tani waxaa loo sameeyaa siyaabaha soo socda:
Ku shub badeecada ku jirta caag biyo qabow. Calaamad muujinaysa tayada wanaagsan waa wadarta guud ee hooseeysa. Haddii ukumuhu wax yar ka kiciyo cawska dusha sare ah, ma aha wax cusub oo cusub, laakiin waxay ku habboon tahay cajiinka iyo cuntooyinka kulul. Markaad aragtid inuu kor u kacay, sida ugu fiican ayaa loo tuuraa.
Ruxin ukunta. Isla mar ahaantaana, alaab tayo leh waa inaysan lahayn wax qarxin iyo daboolo. Joogitaanka dhawaaqyada noocaas ah macnaheedu waa in hawo badan oo la soo miiray, kuwaas oo albaabbada iyo ukunta ay sii xumaatay. Tani waa cunto aan habooneyn.
Waa muhiim! Ukuntu waa ilaha salmonellosis, sidaas darteed waxay u baahan yihiin inay karkaraan ugu yaraan 5 daqiiqo biyo karkaraya. Maskaxda ku hay in bakteeriyada Salmonella ay waayaan waxtarkooda heerkul ah +70 ° C
Fiidiyowga: Hubinta ukumaha cusub ee biyaha leh
Hubi ukumaha loogu talagalay casriga ayaa sidoo kale suurtogal ah in lagu caawiyo qoyaanka. Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa in lagu ogaado cilladaha ku jira gudaha ukunta: joogitaanka lebiska, caaryada, dhaawaca qolofka.
Jebinta qolofka oo si muuqata u qiimeynaya xaaladda gudaha. Xilliga dhowaan la soo saaray, borotiinku wuxuu noqon doonaa mid muuqda oo si taxadar leh loo goosto, iyo qajaarku wuxuu noqon doonaa shirarka. Haddii ukumaha la jiifiyo waqti dheer, markaa waxaad arki doontaa borotiinka faafa ee dareeraha iyo sarreenka caadiga ah.
Bulshada dhexdeeda, fikradda qaldan ee ku saabsan faa'iidooyinka gaarka ah ee ukunta digaaga iyo digaagduurku si cad ayaa u dhexeeysa. Laakiin haddii sharciyada kaydinta ay ku xadgudbeen, ka dibna lagama maarmaan in laga hadlo qiimaha nafaqada ee cuntadan borotiinka ah iyo jimicsiga jirka oo leh maaddooyin muhiim ah. Xaaladdan oo kale, sida caddaynta caafimaad, waxay ku saabsan tahay sumowga iyo cawaaqibkeeda.
Intaa waxaa dheer, kalluumeysiga aan habooneyn ee ukunta, isticmaalka qalabka wasakhda ah, iyo sidoo kale qalabka jikada ee cudurka qaba ayaa halis ku ah horumarka salmonellosis. Bakteeriyada ka soo horjeeda cudurkani wuxuu ku nool yahay ukumo cad, jiirka, iyo qolofka. Ilahooda waa lamaane. Waxaa intaa dheer, sida laga soo xigtay calaamadaha dibadda, khubarada xitaa ma aqoonsan karaan tijaabooyinka cudurka qaba. Tani ma siin doonto midabka qolofka, ma urin, ama waxyaabo kale oo muuqaal ah ee sheyga.
Ma taqaanaa? Shiinaha ayaa rinjiga ukumaha leh mar kasta oo uu ilmuhu dhasho qoyska dhexdiisa. Sida laga soo xigtay aflagaado dadweyne, sida caadada ah waxay u damaanad qaadaysaa ilmo nolol dheer iyo farxad leh..
Markaad isticmaasho ukun dhicis ah ama jiran halis caafimaad: majones guri, isku dar ah sonkorta-ukunta cayriinka (borotiinka ama ukunta), iyo waliba dhammaan cuntooyinka ay soo mareen daaweynta kuleylka aan ku filnayn. Waxay noqon kartaa ukun, ukumo caleen iyo xitaa ukun dhaqameed. Sidaa daraadeed, takhaatiirta waxay si xooggan kugula talinayaan in ay si adag u kormeeraan nolol shafka ah ee badeecadahaas oo ay u diyaariyaan heerkul sare Calaamadaha cudurka suntan ukunta waxay u muuqdaan kuwo muuqda inta lagu jiro maalmaha ugu horreeya ka dib marka la cuno cuntada tayada liita.
Waqtiga quudinta waxaa lagu arkay:
Cudurka gastroenteritis ee ka soo baxa astaamaha cudurka (marka caabuqa xuubka xabka ee mindhicirka yar);
shubanka (sida caadiga ah, saxarada waa dareeraha, waxay u egtahay biyaha bariiska oo joogteyn ah waxaana lagu gartaa midab madow ama jaale ah);
korodhka heerkulka jirka ilaa 39-40 °;
calaamadaha caleemaha ka yimaada geedi socodka nabarrada ee xiidmaha waaweyn;
Ku xadgudubka waxqabadka habka dhexe ee neerfayaasha (oo lagu muujiyay sumeyn daran) waxaana lagu muujiyaa madax xanuun, dawakhaad, hurdo la'aan, murugo);
cilad-darrada nidaamka wadnaha iyo dhiig-baxa (cadaadiska hoos u dhaca, heerka garaaca wadnaha iyo isbeddelka wadnaha);
infekshanka bakteeriyada iyo sepsis (astaamaha caynkaas ah, natiijadu waa halis).
Waa muhiim! Si loo kordhiyo nolosha shimbiraha ee guriga, dufanka qolofta leh dufanka doofaarka, saliidda qudaarta ama batroolka jelly iyo ku rid qol qabow halkaas oo heerkulka ka hooseeya +10 ° C. Beddel ahaan, waxaad ku duubi kartaa weel kasta oo warqad cad oo ku dabool leh fiiqan hoos u dhac oo dabooli doona ceyrinta..
Calaamadaha calaamadahan waxay ku xiran yihiin inta badan dhibka dhibanaha. Laakiin wax kasta oo qandho ah ee ukunta, waa muhiim in jirka laga ilaaliyo fuuqbaxa. Ujeedadaas awgeed, waxaa lagula talinayaa:
xalka "Regidron" ama "Oralit";
wax kasta oo maqaayad ah (kicin firfircoon, "Smekta", "Polyphepan");
Daawoyinka difaaca jirka (maaddooyinka isku dhafan ee multivitamiin, "Methyluracil");
antibiyootikada ay ku qorantahay takhtar qof ahaan;
xaddidaadda isticmaalka waxyaabaha caanaha laga sameeyo, khudradda ceeriin iyo hilibka sigaarka la cabbo (waa wax la jecleysan karo in la siiyo bukaankan muddadaas lagu jiro).
Haddii maalin ka dib uu cudurku sii socdo, waxaad u baahan tahay, adiga oo aan lumin wakhtiga, caawimaad caafimaad raadso.
Ogow sida ukunta iyo ukunta cayriin ay faa'iido leedahay oo waxyeello leh; Gawaarida Guinea iyo ukunta quailka.
Nolosha khudrada ah ee ukunta
Intee in le'eg ayaa ukumaha digaaga iyo digaagduurku noqonayaan kuwo cusub waxay ku xiran yihiin inta badan asalka iyo asalka:
haddii aan ka hadleyno wax soosaarka warshadaha, nolosha faa'iido leh ee badeecadahaas waxay ku kooban tahay 28-30 maalmood;
laakiin alaab guri guri ah ayaa sii wadi kara qiimaha nafaqada inta lagu guda jiro rubuca;
haddii dhammaan shuruudaha heerkulka iyo qoyaanka qolka la buuxiyey, markaa alaabta cusubi way ka sii dari doonto xitaa bil ka dib (tani waxay quseysaa qolalka iyo qaboojiyaha);
ukunta la karkariyey waxay ku habboon yihiin 2 asbuuc (haddii ay ku adag tahay in la kariyo oo lagu kaydiyo qaboojiyaha);
marka badeecada la kariyey ay ku jirto heerkulka qolka, ka dib 48 saacadood mar dambe ma dhammaato;
xitaa in qaboojiyaha, ukunta la karkariyey ka dib markii uu karkariyo 2 maalmood kadib;
Xaalad kasta, shaybaarka leh qolalka dillaacsan ayaan ku dhicin kaydka dheer (waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo isla maalintaas);
haddii qolofka dillaacay inta lagu jiro geedi-karinta, sida tusaale ahaan waxay ku seexan kartaa qaboojiyaha ilaa 4 maalmood;
marka ay dhacdo marka aad ukumaha ku qasaastey ujeeddo yar, waa in loo isticmaalo 3 maalmood ka dib marka la qaboojiyo;
Ukunta khalkhalka ayaanan ku dhufanin 15 cisho, iyada oo la bixinayo in dhuxusha caadiga ah loo isticmaalo;
Laakiin ukunta Easter-ka, oo lagu rasaaseeyay reagyada kiimikada, laga yaabee inaysan ku habboonayn in ka badan 17 maalmood;
Nuqulada Easter-ka ah ee filinka kululeeyaha waa in la cunaa 3 maalmood gudahood.
Ma taqaanaa? Haddii aad si joogto ah ukumo cusub u sameysid maalmo yar gudahood 9% miisaska miiska, qolofkeeduna aad buu u sii adkeyn doonaa xitaa haddii uusan dhicin xitaa dharbaaxo xoog leh ilaa dabaqa.
Halkee iyo sida ugu fiican ee loo kaydiyo ukunta
Si aad u kaydiso alaabtan oo kale, macaamiisha badankood waxay doorbidaan qaybta albaabka qaboojiyaha. Laakiin khubarada munaasabadani waxay muujinayaan xanaaqooda, taas oo la xidhiidha hoos u dhac heerkul ah. Xaaladahaas oo kale, ukumaha ayaa si dhakhso ah u lumiya qiimaha nafaqada oo aan ka muuqan qiime kasta oo nafaqo leh.
Hooyooyinka khibradda leh waxaa lagula talinayaa inay doortaan nooca noocaan ah meel ay mar walba qabow tahay. Marnaba maaha inaysan saxarada ku ridin barafeeyaha.
Talooyin loogu talagalay beeralayda digaaga: waxa la sameeyo haddii ay digaag u qaadaan ukumo yar ama ay si liidato, qiimeynta ukumaha ukunta digaaga, xilliga ukunta wax soo saarka, fiitamiinada siinta digaagga si loo kordhiyo wax soo saarka ukunta.
Xaqiiji in walxad kasta ay tahay in lagu hagaajiyo meel xasiloon oo ay hoos u dhacdo. Waa muhiim in ukunku uusan taaban. Waxay u fiicantahay inaad ka tagto meel gaar ah ama saxaarad, iyaga oo ku faafaya unugyada. Ha ilaawin inaad xirto weelka, sababtoo ah ukuntu waa mid aad u xasaasi u ah ururrada ku xeeran. Laga soo bilaabo qaboojiyaha, waxuu soo dhoweeyaa wax kasta oo ku dhow. Xaqiiji in heerkulka qolka uu yahay heerka + 2 ... +4 ° S. Marna maydhin qolof ka hor inta aadan kaydin. Waxyaabahan oo kale waxay yareeyaan nolosha faa'iidada leh.
Waa muhiim! Markaad ukumo karkarin, ha ku shubin badeecada ka soo qaboojiyaha qaboojiyaha biyaha kulul. Sii isaga 10 daqiiqo si aad u diiriso. Tani waxay ilaalin doontaa sharafta qolofka..
Iyadoo aan qaboojiyaha
Haddii aad doorbidayso habkan, ka dibna u diyaari in sheyga cusub marka lagu kaydiyo xaaladaha qolka leh nidaam heerkulka +20 ° C waa in la cunaa 20 maalmood. Wixii ilaalin wanaagsan, ukumaha waxaa la dhigaa meelo alwaax ah, ka dib markii ay hurdaan. ciid, balka ama milixdaKu dabool dharka dabiiciga ah oo ku dhuuman meel gudcur ah. Waa muhiim in qolku leeyahay hawo wanaagsan.
Qaar ka mid ah milkiilayaasha digaagga ayaa ku talinaya in kaydinta ukunta waa in lagu daaweeyaa brine saliid ah, taas oo loo diyaariyey saami: 20 garaam oo cusbo ah halkii litir oo biyo ah. Foomkan, waxay ku haboonaan doonaan 4 toddobaad.
Calaamadee caano iyo kaydinta ukumaha: dib u eegista
Hm Anigu ma ogi, waan xasuustaa, xilliga xagaaga ee nacasnimada, waxay isku xiireen duurka - halkaasna waxay jiifeen meel dheer oo la iloobey oo ukunta. Gacan ku dhuftay digsiga, waxay go'aansadeen inay wax karsadaan nasiib wacan. Lama soo koobi jirin ukumo, oo waxay ku jiifsadeen lakab marka ay jiifaan, ma ahan oo dhan. Ukumaha oo dhan way qallalan yihiin. Dhuxulku wuxuu ahaa sida aan tan iyo intii aan doorbidayay in aan si dhakhso ah u tuuro ukumaha shaki iwm, oo aan samaynin tijaabooyin.
Waa hagaag, waxaa jira noocyo qurux badan oo kk ah si loo badbaadiyo ukunta - marka hore waa in lagu daboolo dhoobo qoyan, xaqiiqda ah in ukumaha inta lagu jiro gaadiidka aan ku dhawnayn in la garaaco waxaa lagu daboolayaa qoob ka ciyaarka habkan. Waa hagaag, laga yaabo in ugu badan ee la awoodi karo in lagu kaydiyo guriga waa in la saliido xal laba qaybood oo glycerol ah iyo 1 qaybood oo biyo ah, kaliya iyaga si fiican u tirtiro ka hor inta aan saliidda.
Waa hagaag, waxaa jira ukun kale oo wanaagsan oo lagu meeleeyo xal salicylic acid 50 garaam halkii litir oo biyo ah, ka dibna tirtir oo la qalajiyo, kadibna waxaa lagu kaydin karaa qol qabow ilaa 4 bilood.
Hadda waxaad ogtahay in ukumo ay u baahan tahay dabeecad adag oo ku saabsan xulashada alaabta iyo iibinta shuruudaha. Iska dhigo shuruudahan aasaasiga ah, waxaad wiiqi kartaa caafimaadkaaga iyo kuwa aad jeceshahay. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkeenu kaa caawin doono inaad ka fogaato halisahaas.